जया बच्चनले अमिताभ बच्चनलाई मसँग खेल्नबाट रोकिन्– रेखा – ZoomNP
जया बच्चनले अमिताभ बच्चनलाई मसँग खेल्नबाट रोकिन्– रेखा प्रकाशित मिति: बुधवार, भाद्र २२, २०७३ समय - १४:२७:१२ परिपक्व उमेरमा पनि उस्तै सुन्दरी बलिउडकी पुरानी नायिका रेखा यतिबेला जोगिनीजस्तै बनेकी छिन्। उनी आफ्नो व्यक्तिगत जीवन कसैगरि बाहिर आइहाल्ला कि भनेर चनाखो रहन्छिन्। हत्तपत्त पत्रकारहरुसँग भेट्न मान्दिनन्, कसैलाई अन्तवार्ता दिनु त लगभग असंभव नै छ। तर, ठीक यतिबेला एउटा यस्तो पुस्तक बाहिर आएको छ जसले उनको जीवनका स–साना विवरणहरु मात्र होइन कठिनतम क्षणहरु र समस्याग्रस्त सम्वन्धका कथाहरु भनिरहेको छ।
‘रेखाः द अनटोल्ड स्टोरी’ नाम दिइएको यो पुस्तकले कुनै समयकी यी चर्चित नायिकाको विवादास्पद घटना, बदनामी बोकाएका कथा र आजसम्म थाहा नपाइएका रोचक विवरणहरु प्रस्तुत गरेको छ।
यी सबै कुरामात्र होइन, यासेर उस्मानले लेखेको यो जीवनीले बाहिर सर्वत्र चर्चा हुँदैआएको यी नायिकाको अमिताभ बच्चनसँगका सम्वन्धहरुमा पनि प्रकाश पारेको छ।
पुस्तकको एउटा अंशमा लेखकले कुनै बेला ऋषि कपुर र नीतु सिंहको बिहे समारोहमा अचानक निधारमा सिन्दुर लगाएर उपस्थित भएकी रेखाले कसरी सबैलाई चकित पारिदिएकी थिइन् भनेर उल्लेख गरेका छन्। त्यतिबेला समारोहमा उपस्थित पाहुनाहरु र मिडियाकर्मीले पक्कै पनि रेखा भर्खरै विवाहबन्धनमा बाँधिइन् भनेर अनुमान लगाएका थिए। त्यसै पार्टीमा रेखा सरासर अमिताभ बच्चनको छेउमा पुगेर कुरा गर्न थालिन् जसबाट जया बच्चन क्रोधित बन्न पुगेको देखिन्थ्यो।
यति मात्र होइन। पर्दाभन्दा बाहिर त्यतिबेला चलेको ‘सिलसिला’ले अमिताभ र जयाको सम्बन्धलाई नै आघात पारेको थियो। त्यतिबेला सुनिए अनुसार अमिताभलाई रेखासँग अभिनय गर्न जयाले प्रतिबन्धै लगाइदिएकी थिइन्। सन् १९७८मा एउटा विद्यार्थी म्यागजिनलाई अन्तवार्ता दिँदै रेखाले उनको अमिताभ बच्चनसँगका सम्वन्धहरुबारे गरेका खुलासाले ठूलो चर्चा पाएको थियो।
त्यसमा रेखाले अमिताभ बच्चनसँग फेरि कहिल्यै काम गर्न नपाउनुको सम्पूर्ण दोष जया बच्चनमाथि खन्याएकी थिइन्।
‘केहि समयअघि एउटा अवार्ड समारोहमा मैले केहि लाइन कविता पढेकी थिएँ। सुन्नेजति सबैले त्यो कविता अमिताभका प्रति लक्षित थियो भन्ठाने। जबकि ती लाइनहरु जयाका निम्ति लेखिएका थिए,’ रेखाले भनिन्।
अन्तवार्ताका क्रममा रेखाले ती लाइनहरु पढेर सुनाइन्। यस्तो थियो–
‘मैले तिमीलाई हेरेँ, तिमीले अनुहार अन्त फर्कायौ। किन? तिमी सोच्छौ तिमी दिक्क भइसक्यौ। तर, के तिमी देख्दैनौ मेरो अवस्था झन कति भयावह छ? तिम्रा नजरहरुमा गहिरो पिडा देखिन्छ। तर, के तिमी देख्दैनौ कि तिम्रा हेराइभन्दा मेरा मुटुमा लागेका घाउहरु झन कति धेरै गहिरा छन्?’
अन्तवार्तामा यो कुरा थाहापाएपछि जया आक्रोशित बनेको जानकारी आफुले कसरी थाहा पाएकी थिइन् भनेर पनि रेखाले उल्लेख गरेकी छिन्। रेखाले एउटा नयाँ खुलासा पनि गरेकी छिन्–
‘त्यतिबेला मुकद्दरका सिकन्दर सिनेमाको ट्रायल सो हेर्नका निम्ति पुरै बच्चन परिवार आएका थिए। म प्रोजेक्सन रुमबाट उनीहरुका एक एक गतिविधि नियालिरहेकी थिएँ। सबैभन्दा अघिल्लो लहरमा जया बसेकी थिइन् भने त्यसको ठीक पछाडिको लहरमा अमिताभ उनको बा आमासँग बसेका थिए। त्यतिबेला जयालाई जति स्पष्टसँग म देख्न सकिरहेकी थिएँ उनीसँग बसेका परिवारका सदस्यले देख्न सक्दैन थिए। सिनेमा चल्न थाल्यो। पर्दामा जब अमिताभ र मेरो बीचमा प्रेमका दृश्य चल्न थाल्यो जयाका आँखाबाट झरेका आँसु अनुहारमा तप्किँदै गरैको म स्पष्ट देखिरहेकी थिएँ। त्यो ट्रायल सोको एक सातापछि नै इन्डस्ट्रीका हरेकले अब उपरान्त अमिताभले मसँग नखेल्ने भनेर निर्माताहरुलाई बताएको जानकारी मलाइ दिन थालेका थिए। यो विषयबारे प्रत्येकले मलाइ अवगत गराए पनि अमिताभ स्वयंले एक शब्द कहिल्यै केहि भनेनन्। जब मैले आफै अमिताभलाई यस बारेमा सोधेँ, उनले ठाडै भने, ‘म एक शब्द पनि बोल्न चाहन्न। यो विषयमा म केहि नसोध।’
यी दुई चर्चित नायक नायिकालाई लिएर हरेकले चाँसो र चर्चा गर्ने ती दिनहरु र त्यसका नभनिएका कथाहरु झण्डै तीन दसकपछि अब सबैका निम्ति सार्वजनिक भएको छ। वर्षौंसम्म रेखालाई समाज र एकथरि दर्शकले ‘घर भाँडेको’ अभियोग लगाउँदै आयो। तर, यस्ता थुप्रै अभियोग लगाउनेहरुको दृष्टिकोण बदल्न के यो पुस्तक सफल होला? श्रोत सेतोपाटि